Topic: ကိုယ်ဝန်, ကလေးမွေးဖွား
ယခုကလေးမီးဖွားသည့်ဆေးရုံများရှိရာကာရာဂန်ဒါတွင်နေထိုင်သူများကိုကလေးများအား VIKASOL ဆေးထိုးသည်။ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလားသို့မဟုတ်မိခင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လား။ ကြိုတင်ရေးသားထားသောစွန့်လွှတ်မှုကိုရေးပါ။ ဤရွေ့ကား, သူတို့ကိုယ်သူတို့အများဆုံးစဉ်းစားသောသူတို့အဘို့ဖြစ်၏ ...
2 Kajtex Tramonto 1 ပိတ်ချော 14 ။ ဒီတွန်းလှည်းမှာဘယ်သူရှိသေးလဲ။ ကဇyrkကိုပြန်ပစ်ရန်အဆင်မပြေပါဘုရားသခင်၊ နံရံမှသို့မဟုတ်ကော်ဇောဖြင့်ကော်ဇောဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ရထားလား။ !!! ငါကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့်! အရမ်းကိုသက်တောင့်သက်သာရှိတယ် ...
ဆေးရုံတွင်ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။ ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင်ကြီးမားသောအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါသည် - ခန္ဓာကိုယ်သည်ကလေးမွေးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ကျွန်တော့်ကိုသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာထဲတစ်နေ့တစ်နေ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။
ယေဘုယျအထုပ် - အထဲ၌ရှိသောအရာ။ ဆေးဆိုင်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် ၀ ယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူ။ စျေးသက်သာပါသည်။ ဒီအထုပ်တွင်တစ်ခါသုံးအနှီးမီးယပ်ရောဂါပါ ၀ င်သောအစုတစ်ခု၊ တစ်ခါသုံး ဦး ထုပ်၊ ဖိနပ်အဖုံး၊ ၀ တ်စုံစသည်တို့တိုသည်။
မွေးကင်းစကလေးအနှီး၊ အတွင်းခံနှင့်အခြားအရာအားလုံးမည်မျှပြင်ဆင်သင့်သနည်း။ နွေးထွေးသောအနှီး ၁၀-၁၂ နှင့်ပါးလွှာသော ၅ ခုရှိသည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ဆလိုက်ဒါများအနည်းဆုံး ၅ လုံးလိုအပ်သည်
ကလေးရေချိုးနည်း အဘယျသို့စံနှုန်းများအားဖြင့်? မဆို။ ၂ လအထိပျိုးခင်းကိုသာမန်ရေချိုးခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆေးကြောခဲ့ပြီးပိုမိုအားကောင်းလာသောအခါဆလိုက်တစ်ခုဝယ်လိုက်သည်။
၂၅-၂၇ ပတ်တွင်မည်သူမဆိုမွေးဖွားခဲ့ပါသလား။ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအသိအကျွမ်းရှိပါသလား ဒီနွေရာသီမှာသူငယ်ချင်းတွေကအမှုဖွင့်ပြီးသွေးတွေပွင့်လာပြီးကဲသာဘုရင်ကိုပြုရမယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်မွေးလာတယ်။ ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချစ်ခင်ရပါသောအမျိုးသမီးများ၊ ငါ့ကိုပြောပါ၊ dyufaston သည်ဆေးပြားတစ်ထုပ်အတွက်ဘယ်လောက်ယူရမည်၊ မည်သို့ယူရမည်နည်း။ ရလဒ်ကားအဘယ်နည်း။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါကသင်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, မသောက်ရ။ 450 p ...
ဆွဲဆောင်။ လဘယ်လောက်လဲ ဘယ်အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ကြက်သားလဲ ဘယ်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ အကယ်၍ ဓာတ်မတည့်ပါကအသားကင် (ကြက်သို့မဟုတ်အမဲသား) ကိုအသားကင် (ကြက်သားသို့မဟုတ်အမဲသား) ခြောက်လ၊ အစပိုင်းမှာအလွန်သေးငယ်သောအသားကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ရာသီလာစဉ်အတွင်း Ovulation ???? မျိုးဥထွက်ခြင်းဖြင့်အပူချိန်များလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအပူချိန်သည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းသည်ပထမအဆင့်တွင်ဟော်မုန်းများမရှိခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
မိခင်နို့အတွက်ဆန်ကိုစားလို့ရနိုင်မလား ??? သငျသညျ ... ))) ... မိခင်များကိုအံ့အားသင့်မိသည် - ထုတ်ကုန်အသစ်များမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်သင်အားလုံးနီးပါးကိုစားနိုင်သည် - အနည်းငယ် စား၍ ကလေး၏တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ပါ။
မည်သည့်ကိုယ်ဝန်ကာလအတွင်းမီးယပ်သားဖွားဆရာဝန်ကိုသင်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့သနည်း။ ဒီပထမ reception ည့်ခံပွဲကဘယ်လိုသွားသလဲ။ 1 ပတ်မှာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကဒ်ပြားယူပါ။ သင့်အကြောင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအဲဒီမှာရေးထားတယ် ...
ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဇာထိုးနိုင် ???? ကျွန်မဟာအပ်ထိုးပြီးလက်နဲ့အပ်ထိုးထားတယ်။ သမီးနှစ်ယောက်စလုံးဟာလှပပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်။ နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏သဘောထားပြောင်းလဲပါ။
Duphaston ကိုယူခဲ့တဲ့ဘယ်မိခင်ကလဲ။ အဘယ်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသနည်း www.babyplan.ru မှာမေးကြည့်ပါ။ Duphaston သည်ဟော်မုန်းကုသမှုဆေးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပရိုဂျက်စတုန်းချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောရောဂါဗေဒအခြေအနေများကိုပြုပြင်ရန်အသုံးပြုသည်။
ငါရာသီလာခြင်းနှင့်အတူကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ကာလအတွင်းစစ်ဆေးမှုကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူက hCG ဟော်မုန်းကိုဓါတ်ပြုပြီးသူကသူ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုမဆုံးရှုံးတော့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်မျှော်လင့်ပါက ...
ကိုယ်ဝန်ရရန်ဘယ်လောက်ကြာကြာကြာကြာလုပ်ခဲ့သနည်း ??? နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ရဖို့ငါသန္ဓေတားဆေးသောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သူတို့ကိုမသောက်တော့ဘူး ၂ လအကြာမှာကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။ ဒါလုံးဝသီးခြားစီ။ ဥပမာ…
ရက်သတ္တပတ်မည်မျှကြာသည်အထိဆေးကုသမှုကိုကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့သနည်း၊ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေမည်သို့ရှိခဲ့သနည်း။ ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုအခြားအရာတစ်ခုခုအကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်နေဆဲ, သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းမရှိဘဲလုပျနိုငျပါသလား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုကုစားလိမ့်မည်နှင့် ...
၂၉ ပတ်မှ စတင်၍ ကလေးမွေးနိုင်မည်လား ???? ငါကံမကောင်းတဲ့အတွက်ကောင်မလေးအသက် ၃၀ မှာမွေးတယ်။ (((((မင်းမှာမှားယွင်းတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေရှိနိုင်တယ်)) ကျွန်မကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။
ပြောင်းလဲနေသော ultrasound ကဘာလဲ? တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ၏ ultrasound
ပြောင်းလဲနေသော ultrasound ကဘာလဲ? တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ၏ ultrasound ဤသည်သတ်မှတ်ထားသောကြားကာလတွင်တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများကိုအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများ၏ ultrasound နှင့်အတူ, သားအိမ်စစ်ဆေးသည် ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မည်သည့်အဆိပ်အဆိပ်သင့်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သနည်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မည်သည့်အဆိပ်အဆိပ်သင့်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သနည်း။ နှောင့်နှေးပြီးနောက်ချက်ချင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါစောစောပိုင်းလောက်မှာ၊ ပထမတစ်ဝက်မှာကျွန်တော်အဆိပ်မသင့်ခဲ့ဘူး။
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,959 စက္ကန့်ကျော် Generate ။